Umlando wamanxiwa aseRoma ogwini lwaseBolonia | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 11/01/2022 17:00 | España, Yini ongayibona
Kukhona isigodi eningizimu yeSpain ebizwa ngokuthi i-Bologna. Lapha, ogwini lwayo, ogwini lweStrait of Gibraltar, kuneqoqo lamanxiwa aseRoma aziwa ngegama elithi UBaelo Claudia. Baneminyaka engaba ngu-2 ubudala futhi bayigugu elikhulu.
Namuhla, ku-Actualidad Viajes, i umlando wamanxiwa aseRoma ogwini lwaseBolonia.
1 E-Bologna, Spain
2 Amanxiwa aseRoma eBolonia Beach
3 Indawo yokuvubukula yase-Baelo Claudia
Uma ulalela i-Bologna ucabanga ngokuzenzakalelayo nge-Italy kodwa cha, kulokhu kuyi- idolobhana elingasogwini likamasipala waseTarifa, esifundazweni saseCádiz, eningizimu yeSpain. Isogwini loLwandle i-Atlantic, ezimbalwa nje Amakhilomitha angama-23 ngaphezulu noma ngaphansi ngomgwaqo usuka eTarifa, idolobha lona elihlala kwabadumile ICosta de la Luz ukuthi, iStrait of Gibraltar ngokusebenzisa, ibheka eMorocco.
Bologna isethekwini futhi amanxiwa amaRoma asibizayo namuhla aseduze nogu. Ziyacatshangelwa amanxiwa aphelele kakhulu edolobha laseRoma kuze kube manje atholakala eSpain. Okukhazimulayo!
Ibhishi laseBolonia lingamakhilomitha angu-4 ubude futhi linesilinganiso sobubanzi obungamamitha angu-70. Bambalwa kakhulu abantu abahlala lapha, inani labantu bakhona alifinyeleli kubantu abayi-120.
Isikhundla sale ndawo sinelungelo futhi sijabulela ukubukwa okumangalisayo: izihlabathi ezimhlophe zolwandle lwaseBolonia zisuka ePunta Camarinal ziye ePunta Paloma, futhi ungabona amagquma aseSan Bartolome empumalanga nezintaba zaseHiguera nasePlata ngasentshonalanga. Ngakho-ke, kwakhiwa i-cove evikelekile eyayikade ilungele ukubopha izikebhe.
Amanxiwa aseRoma eBolonia Beach
Kodwa kuthiwani ngala manxiwa? Basitshela ukuthi esikhathini esithile kwahlala abantu abaningi lapha kunanamuhla, lokho kuyiqiniso. Iqiniso liwukuthi I-Baelo Claudia kwakuyidolobha lasendulo laseRoma e-Hispania. Ekuqaleni kwakuyi-a idolobhana lokudoba kanye nebhuloho lezentengiselwano futhi yayazi indlela yokuchuma kakhulu ngesikhathi soMbusi uKlawudiyu, nakuba ngenxa yokuzamazama komhlaba okuqhubekayo kwagcina elahliwe cishe ngekhulu lesi-XNUMX.
UBaelo Claudia Yasungulwa ekupheleni kwekhulu lesi-XNUMX BC. ukukhuthaza ukuhwebelana neNyakatho ne-Afrika ngokusebenzisa i ukudoba i-tuna, ukuhweba ngosawoti kanye nokukhiqizwa garum (usoso wezinhlanzi ovutshiwe osetshenziswa kakhulu ekuphekeni kwasendulo), nakuba kukholelwa ukuthi nawo wawunomsebenzi othile wokuphatha kahulumeni.
Kwakungesikhathi sikaClaudio lapho yathola khona isicoco sokuba umasipala futhi ingcebo yayo ibonakala ngobuningi nasezingeni lezakhiwo zayo. Abavubukuli bakholelwa ukuthi ukuphakama kwayo kwafinyelelwa phakathi kwekhulu lokuqala nelesi-XNUMX BC, kodwa lokho maphakathi nekhulu lesibili leminyaka ukuzamazama komhlaba okukhulu kwabhidlika ingxenye enkulu yezakhiwo, kwaphawula ukuqala kokuphela kwakho..
Kwalandelwa le nhlekelele yemvelo ukuhlaselwa kwezigcwelegcwele zasolwandle ekhulwini elilandelayo, kokubili isiJalimane nesiqaba, ngakho phakathi nezikhathi zokwehla nokwenyuka ukuphela kwako kwafika phakathi nekhulu lesithupha.
Indawo yokuvubukula yase-Baelo Claudia
Umtholi wamanxiwa kwakunguJorge Bonsor. Imivubukulo iveze amanxiwa aphelele amaRoma kuyo yonke iNhlonhlo Yase-Iberia futhi namuhla ithempeli lika-Isis, inkundla yemidlalo yaseshashalazini, i-basilica, imakethe ingahlukaniswa ...
Ukuhlelwa kwedolobha kwala manxiwa kuyamangalisa futhi landela ibalazwe elivamile lamaRoma elinemizila emibili, lo i-cardo maximus eyinqamula nge-engeli elungile bese iqonda enyakatho-eningizimu kanye i-decumanus maximus elisuka empumalanga liye entshonalanga, liphele ekungeneni komuzi.
Lapho lezi zindlela ezimbili ziphambana khona kwakuyi- inkundla noma isikwele esikhulu, egandaywe ngetshe lokuqala elivela eTarifa, lisabonakala futhi lilondolozwe kahle. Lesi sithangami sakhiwa ngesikhathi sika-Augustus, kodwa idolobha lonke lakhula ngokuphawulekayo ngaphansi kokubusa kukaClaudius, ngesikhathi seRiphabhulikhi.
Eduze nezakhiwo zabaphathi bakahulumeni. Bekukhona neplaza evulekile enamavulandi ezinhlangothini ezintathu angena kuwo ithempeli lombusi, i-curia kanye negumbi lokuhlangana.
Ngemuva kunesinye isakhiwo esibalulekile, i i-basilica, Wawunemisebenzi eminingana, nakuba owawubaluleke kunawo wonke wawuyinkundla yenkantolo yobulungisa. Ngakwesobunxele kube nezakhiwo eziningi ezakhiwe ngamatshe phakathi kwazo izitolo eziningi, indawo yokucima ukoma, isibonelo.
Isizinda semivubukulo namuhla sigcina indawo emele kakhulu idolobha laseRoma, okuyi izindonga zamatshe zaziqiniswe ngezinqaba zokulinda ezingamashumi amane, the iminyango emikhulu yedolobha, izakhiwo zokuphatha ezifana inqolobane yomlando kamasipala noma ithimba lezigele, inkundla, izinkantolo ezayenganyelwe yisithombe sombusi uTrajan esingaphezu kwamamitha amathathu ukuphakama, amathempeli amane, amathathu awo anikezelwe kuMinerva, uJuno noJupiter, elinye ku-Isis; enkulu yaseshashalazini ekwazi ukuthatha abantu abayizinkulungwane ezimbili kanye nezinsalela a emakethe enomkhakha okhethekile wokudayiswa kwenyama nokudla okunezitolo eziyi-14 kanye negceke langaphakathi, iziphethu ezishisayo namanye amabhizinisi.
Alikho idolobha laseRoma elingenawo umsele, ngakho-ke lapha eBaelo Claudia kunezine. Kwakukhona imisele emine eyayinikeza idolobha amanzi futhi zazibalulekile ekusebenzeni kwemboni yasekhaya ye garum, isibonelo, kodwa futhi nokuphila kwansuku zonke edolobheni. Iphinde yafaka nesistimu yokuhambisa amanzi kanye nendle. Lona ngempela idolobha laseRoma elinazo zonke izincwadi futhi yingakho liwumcebo weqiniso wemivubukulo.
Ingenye yamapharele okuvubukula ase-Andalusia, futhi ibala i-Italica ezindaweni zaseSeville nase-Acinipo emaphethelweni aseRonda. Amanxiwa awagcini nje ngokulondolozwa kodwa abuyiselwe, evunyelwe yisimo esikhulu sokulondolozwa kwawo.
Namuhla usebenza endaweni a Isikhungo sezivakashi okuyingosi yeqiniso yedolobha. Isakhiwo sikakhonkolo esasiphikiswa kakhulu abantu bendawo ngaleso sikhathi, kodwa silahleka kahle endaweni evamile yendunduma. Kune-atrium emaphakathi, ependwe emhlophe futhi enovulandi wengilazi obheke ugu oluhle.
Ukuvakashela lesi sikhungo kuyisandulelo esihle sokuvakashela amanxiwa kusukela kukhona imodeli yesikali yedolobha ekuqaleni kwakhe futhi a umhlahlandlela womsindo Kuhle kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, kukhona amagugu athile aboniswayo njengesithombe semabula okukholakala ukuthi ngesikankulunkulukazi othile futhi sitholakala ePuerta de Carteia, enye yezindawo zokungena eziyinhloko zedolobha, ipayipi eliholayo lekhulu lokuqala, ikholomu ebuyiselwe evela i-basilica kanye nezinsalela zesithombe semabula esitholakala ezindaweni zokugeza zasolwandle ezimele umfanekiso onqunu womsubathi wesilisa futhi saziwa ngokuthi u-Doryforus de Baelo Claudia.
Amanxiwa atholakala phakathi nendawo ngakho-ke kukhona umzila ophakanyisiwe, nakuba ungathatha indlela ekufanele kakhulu. Eduze kwalapho okusele khona komnyango ongenela empumalanga kunomsele omncane owenziwe ngesilinganiso sawo sokuqala owawungaphezudlwana nje kwamakhilomitha amahlanu ubude futhi uthwala amanzi uwayise ezindlini zangasese ezazingasentshonalanga. Kukholakala ukuthi lawa magumbi okugeza abezemidlalo kanye nokungcebeleka futhi njengenjwayelo abe nesiphethu esishisayo esikhulu nesiwubukhazikhazi kanye nencanyana nengasese.
Phakathi kwezinye izikhala zokuxhumana kwakuyinkundla yesikwele, lapho amakholomu angu-12 asagcinwe khona nxazonke, i-basilica futhi njengoba sishilo ngaphambili. ithiyetha engenye yezindawo ezilondolozwe ngokuphelele futhi ezibuyiselwe. Isendaweni eyehlelayo futhi yonke indawo yokuhlala ibuyiselwe. Ize isetshenziswe namuhla njengesilungiselelo sesimanje emikhiqizweni yasehlobo yaseshashalazini yakudala yaseSpain.
Kamuva, eningizimu-mpumalanga kakhulu yesayithi, kukhona isikhungo sasolwandle Kubaluleke kakhulu ukuvakashela ukuze uqedele ukuqonda idolobha nomlando walo. Imayelana isifunda sezimboni, kusukela endaweni lapho i izindawo zokugeza ezinosawoti, lapho i-tuna yayihlanzwa futhi ifakwe usawoti ukuze igcinwe. Lena kwakuyimboni eyenza i-Baelo Claudia inothisa futhi ungabona ngisho namanetha abuyiselwe ayesetshenziswa amaRoma ngaleso sikhathi ukudoba izinhlanzi ezinobukhulu.
Iqiniso elilodwa lokugcina elijabulisayo? Ngo-2021 u-Baelo Claudia waba yisigameko sokuqoshwa kochungechunge lweNetflix, The Crown. Kwaba yi-Egypt kafushane lapho uchungechunge lubonisa ukuvakasha kuka-Lady Di e-Egypt ngo-1992.
Ukwaziswa okuwusizo kwe-Baelo Claudia:
I-Horario de apertura: kusukela ngoJanuwari 1 kuya ku-March 31 futhi kusukela ngo-September 16 kuya ku-December 31 kuvulwa kusukela ngoLwesibili kuya ngoMgqibelo kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-6 ntambama futhi ngamaSonto namaholide kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama. Kusukela ngo-Ephreli 1 kuya kuJuni 30, kuvulwa kusukela ngoLwesibili kuya ngoMgqibelo kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-9pm futhi ngamaSonto namaholide kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama. Kusukela ngoJulayi 1 kuya kuSepthemba 15 kuvulwa kusukela ngoLwesibili kuya ngoMgqibelo kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama futhi kusukela ngo-6 kuye ku-9 ntambama namaSonto namaholide kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama. NgeMisombuluko kuyavalwa.
Amaholide omphakathi ngenani angoJulayi 16 noSepthemba 8 kanti lezo zinsuku isiza sivulwa ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama.
Ehlobo ungajabulela imibukiso ku-amphitheatre.
Kukhona izinkambo eziqondisiwe ezinokuhlelwa kwentengo.
Kungenwa mahhala izakhamizi ze-EU ezinepasipoti noma i-ID. Ngaphandle kwalokho kubiza ama-euro ayi-1,50.
Ungafika kanjani: ukusuka eTarifa emgwaqeni u-N-340 ukuya kukhilomitha elingu-70.2. Jikela ngase-CA-8202 bese ulandela umgwaqo wendawo ofinyelela edolobhaneni lase-Ensenada Bolonia. Hamba uqonde esikhundleni sokujikela kwesokunxele uye ngasebhishi futhi kumamitha angu-500 uzobona isikhungo sezivakashi kanye nezindawo zokupaka mahhala ngakwesokunxele.
Indawo: Ensenada de Bolonia s / n. Tarifa, Cádiz. Spain.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Umlando wamanxiwa aseRoma ogwini lwaseBolonia